करेलाको जुस नै काफी , क्यान्सरदेखि यी ७ खतरनाक रोगबाट छुटकारा पाउनको लागि ! – MediaNP
करेला स्वादमा निकै तितो हुने कारण यसलाई अधिकाश मानिसहरुले खान रुचाउँदैनन् । वास्तवममा करेला जति तितो छ, त्यतिनै स्वस्थ्यको लागी गुणकारी छ । यसलाई तरकारी, अचारको साथमा जुस बनाएर पनि खान सकिन्छ । तरकारी, अचार वा फ्राई गरेर खानुभन्दा पनि यसको जुस स्वस्थ्यको लागी लाभदायक छ । यसले रगतको सफाइदेखि एलर्जी, टाउँको दुख्ने समस्या, पेटदुख्ने समस्या, मुटुरोग, मधुमेह लगायतका अन्य धेरै रोगलाई फाइदा गरी क्यान्सर रोगबाट पनि बचाउँछ । यसको साथमा करेलाको जुुसको फाइदाहरु यस्ता छन्ः
यदि त्वचा सम्बन्धी समस्या छ भने उक्त समस्यालाई समधान गर्नको लागी १ कप करेलाको जुसमा कागतीको रस मिलाएर दैनिक रुपमा बिहान खाली पेटमा खानाले रक्तशोषक गुण प्राप्त हुन्छ । जसको कारणले त्वचासगँ सम्बन्धी समस्याको समधान हुनेछ । त्यसैगरी करेलाको जुसमा हल्का कागतीको रस मिलाएर अनुहारमा लगाउनाले अनुहारमा रहेको कालोदाग धब्बा हटेर
गई अनुहार बेदाग रहित हुन्छ ।
आँखा सम्बन्धीत कुनै समस्या छ भने त्यस्तो समस्यालाई समधान गर्नको लागी दैनिक १ कप करेलाको जुस सेवन गर्नाले राहत मिल्दछ । आँखाको दृष्टी कमजोर भएकाको लागी करेला निकै उपयोगी औषधी हो ।
मधुमेह रोग लागेको लागी यो एउटा अति प्रभावकारी औषधी हो । यस्तो रोग भएकाले करेलालाई छायामा सुकाएर पिसेर पाउडर तयार गरी प्रतिदिन एक चम्चा सेवन गर्नाले निकै लाभ लिन सकिनेछ ।
करेलामा अधिक मात्रामा फस्फोरस पाइन्छ, यसकारण कब्जियत, पाचन सम्बन्धीत समस्या समधान भई पेट सफा हुन्छ । त्यसको साथमा दैनिक १ गिलास करेलाको जुस सेवन गर्नुपर्दछ । यसबाट लिवरको पनि सहि तरिकाले सफाइ हुनेछ भने पोलियोको लागी पनि यो निकै फाइदा औषधी हो ।
५.रक्तसञ्चार सहि तरिकाले गर्ने
करेला एक रक्तशोषक को साथमा हृदय सम्बन्धीत समस्याको लागी निकै फाइदा गुणवान औषधी हो यसले शरीरमा रहेको हानीकारक हृदयको धमनीमा जम्न नदिई रक्तसञ्चार कार्य सहि तरिकाले गर्दछ ।
६.दम तथा पाइल्सको उपचार
दम रोगीले करेलाको सब्जी बनाएर खाँदा फाइदा हुन्छ भने पाइल्सको समस्या भएकाले एक चम्चा करेलाको जुसमा आधा चम्चा मह मिसाएर सेवन गर्दा आराम मिल्छ ।
७.उल्टी वा हैजा
उल्टी वा हैजाको समस्याले सताएमा बिरे नुनको साथमा करेलाको जुस मिसाएर खानाले तरुन्त आराम मिल्छ ।
प्रतिदिन करेला खाने हो भने रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताको बढि कुनै पनि किसिमको संक्रमण हुदैन् र बिरामी वा रोग राख्ने सम्भावना एकदमै न्युन हुन्छ ।
ब्याल्कहेड्स किन आउँछ ? यस्ता छन् कारण र सजिलै हटाउने उपाय ! (विधिसहित)
किन हुन्छ स्तनमा दुधको कमी ? कारण र उपचार विधी !